ब्राउजरमा लिंकहरू खोल्न नयाँ फेसबुक अनुप्रयोग कसरी बनाउने ग्याजेट समाचार
को प्रयोगकर्ताहरू अनुप्रयोगहरू फेसबुक मोबाइलहरु लाई याद गरीएको छaअनुप्रयोगले व्यवहार गर्ने तरीकामा भर्खरको परिवर्तन जब हामी लिंक खोल्दछौं। हामीलाई हाम्रो मनपर्ने पूर्वनिर्धारित ब्राउजरमा पठाउनुको सट्टा अब लिंक अनुप्रयोगमा खुल्छ।
फेसबुकमा उनीहरू भन्छन् कि लिंकहरू यस तरीकाले छिटो खुल्छन्, तर यो त्यस्तो छैन। सायद ढिलो उपकरणहरूमा यस्तो देखिन्छ कि ती छिटो खोल्दछन् किनकि तपाईले अनुप्रयोगहरू बीचमा हाम फाल्नुपर्दैन, तर वेब पृष्ठहरू (विशेष रूपमा सामग्रीको मामलामा सबैभन्दा भारी) उल्लेखनीय रूपमा लामो चार्ज समय लिनुहोस् तिनीहरूलाई Chrome वा अरू कुनै पनि ब्राउजरमा खोल्नको लागि कस्तो लागत हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो पूर्वनिर्धारित ब्राउजरमा लिंकहरूको उद्घाटन परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, तब यी सरल चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् जुन हामी तपाईंलाई दिन लाग्दै छौं।
1 Chrome मा लिंक खोल्नुहोस्
2 फेसबुक ब्राउजर असक्षम गर्नुहोस्
Chrome मा लिंक खोल्नुहोस्
फेसबुकले यो नयाँ कार्यक्षमताको चेतावनी दिन्छ, तर तपाईंले ध्यान दिनुभएन भने तपाईंले याद गर्नुहुने छैन। चेतावनी तपाईंले पृष्ठ ब्राउज गर्न सुरू गर्ने बित्तिकै अदृश्य हुन्छ, त्यसैले तपाईंले यो देख्नु भयो भनेर स्वीकार्नु आवश्यक पर्दैन।
तपाईं सक्नुहुन्छ कुनै पनि समयमा क्रोममा फिर्ता जानुहोस्, तर यसको मतलब यो होइन कि यो तपाईंले पछि खोल्ने कुनै लिंकको लागि पूर्वनिर्धारित ब्राउजर हुनेछ। यो गर्नका लागि जब तपाईले एउटा लिंक खोल्नुहुन्छ, तीन ठाडो पोइन्टहरूमा क्लिक गर्नुहोस् जुन विकल्पहरू सूचित गर्दछ। जस्तो कि तपाई छविमा देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा विकल्प देखा पर्दछ जुन भन्छ "क्रोममा खोल्नुहोस्"। यदि तपाईले हेर्न चाहानु भएको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने, यो गुगल ब्राउजरमा खुल्नेछ।
यद्यपि, यस विधिले चाहिने धेरै छोड्छ किनकि हामीले एउटा थप चरण लिनुपर्दछ जुन हामीले बचत गर्न सक्थ्यौं यदि हामीले शुरूबाट क्रोममा वा अन्य कुनै बाह्य ब्राउजरमा लिंक खोल्‍यौं भने।
फेसबुक ब्राउजर असक्षम गर्नुहोस्
तपाईं सक्नुहुन्छ फेसबुक ब्राउजर असक्षम गर्नुहोस् र तपाइँको मनपर्ने अनुप्रयोगमा फर्कनुहोस्। मा अनुप्रयोग फेसबुकबाट, नेभिगेसन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र स्क्रिन स्क्रोल गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं यो भन्नु भएको ठाउँमा पुग्नुहुन्न अनुप्रयोग सेटिंग्स। जब तपाईंसँग यो हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
विकल्पहरूको सूची देखा पर्नेछ। क्लिक गर्नुहोस् जहाँ यो भन्छ Aसधैं बाह्य ब्राउजरको साथ लिंकहरू खोल्नुहोस्। विकल्प सक्रिय हुनेछ, र त्यहाँबाट तपाईं विकल्पहरू वा अनुप्रयोगबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ र प्रत्येक पटक तपाईं लिंक खोल्न चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको पूर्वनिर्धारित ब्राउजरको साथ त्यसो गर्दछ।
हामी आशा गर्दछौं कि यी सरल चरणहरू उपयोगी भएको छ र तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने बाह्य ब्राउजरमा फर्कन मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » ब्राउजरमा लिंकहरू खोल्न नयाँ फेसबुक अनुप्रयोग कसरी बनाउने
जुलियो सेसर लगुना सी। भन्यो
यो एन्ड्रोइडमा हुन्छ तर म यो कसरी गर्दछु आईफोनको आईओएस हड्डीमा
Julio Cesar लागुना सी लाई जवाफ दिनुहोस्।
रिचर्ड होल्डरल्याण्ड भन्यो
महान, उत्तम क्रोमको साथ लिंकहरू खोल्नको लागि हो। धन्यबाद।
रिचर्ड होल्डरल्यान्डलाई जवाफ दिनुहोस्
Hilda solis भन्यो
ती हेडिंग अब मेनुमा देखा पर्दैन
हिल्डा सोलिसलाई जवाफ दिनुहोस्
ल्लू ब्रोसा भन्यो
आईफोनको लागि यो विकल्प मेनूमा छैन। !!!!
कसैलाई थाहा छ यो कसरी गर्ने?
Brossa llu लाई जवाफ दिनुहोस्
विकल्पमा तपाईले लेखमा टिप्पणी गर्नुभयो देखा पर्दैन।
धन्यबाद, मलाई यो सच्याउने तरिका थाहा थिएन।
प्रकाशनको लागि धेरै धेरै धन्यबाद, मैले यस सुधार गर्न प्रयास गर्दै छु। मसँग एन्ड्रोइड छ र यसलाई सुधार गर्नमा कुनै समस्या भएको थिएन।
अनुप्रयोग कन्फिगरेसनमा Tego Facebook_142.0.0.29.92 देखा पर्दैन, लिंकहरू बाहिरी रूपमा खुल्छन्
Google.com: तपाईंलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ? हामी तपाईंलाई उनीहरूको उत्तम विधिहरू सिकाउँछौं